Uyazigqaja ngomsebenzi wakhe unozinti weTTM - Impempe
Uyazigqaja ngomsebenzi wakhe unozinti weTTM
Ukuvimba kahle kukaWashington Arubi weTshakhuma Tsha Madzivhandila ngesikhathi benza obekungacatshangwa muntu bewashisa iMamelodi Sundowns ijezi kwiNedbank Cup sekumphendule isilomo kuleli.
Lo nozinti oneminyaka engu-35 odabuka eZimbabwe ubenza izinangaliso evimba inqwaba yamabhola eBrazilians, washaya esokugcina isipikili ngokuvimba nephenathi kaHlompho Kekana.
Nokho uyakugcizelela ukuthi ukufika kowamanqamu kwiNedbank Cup akuzuba yinto abazoyikhumbula ngenjabulo uma bengakwazanga ukuvika izembe okuyikho okubaluleke kakhulu njengamanje.
“Asifuni ukudidiseka, sikhohlwe yiligi ngoba kumele sisinde, kodwa ke sonke sesiwujahile owamanqamu,” usho kanje ekhuluma nabePhakaaathi.
“Manje sekumele sigxile kule midlalo eyisishiyagalombili esele. Yonke le midlalo isizofana neyamanqamu kithi ukuze kufike usuku lowamanqamu kwiNedbank Cup sibe singakhathazeke ngalutho.
“Ukuwina indebe kuzoba yibhonasi kuwo wonke umuntu oseqenjini, kodwa akumele silibale ukuthi sisahlalelwe womkhulu umsebenzi,” kuchaza u-Arubi.
Useke wadlala emaqenjini ambalwa kusukela afika kuleli okubalwa kuwo AmaZulu neSuperSport United abekuyo ngesizini edlule. Uthi bekungamkhathazi ukubukela esebhentshini njalo kwazise uRonwen Williams ubegila izimanga emapalini ngesizini edlule.
“Wonke umuntu unezifiso empilweni… mina njengonozinti esami wukudlala njalo futhi uma iqembu lifika kowamanqamu kuvimba wena, kuyajabulisa ngoba kuyinkomba yokuthi kukhona okubonakalayo okwenzayo eqenjini.
“Uma uqhubeka nokuzikhandla, ungazenyezi bese ukuziba okubi… ekugcineni kumele umeseke osuke edlala ngoba sibeka impumelelo yeqembu phambili hhayi eyomuntu ngayedwana,” kusho yena.
ITshakhuma izomdinga ukuthi aphinde anqande ngisho impukane ezama ukudlula phambi kwakhe uma seyibhekene neCape Town City emdlalweni weDStv Premiership ngoMgqibelo ntambama.
Previous Previous post: LISENETHINI!: Isikhumbuze ukuthi ibhola liyagingqika iTTM
Next Next post: Usethandazela ukuthi kungamphindi ukulimala oweChiefs